Singapore 50th Birthday
စင်္ကာပူ နှစ် 50 ပြည့် (National day) အထိမ်းအမှတ်အဖြင့် Myanmar origin မှ မိတ်ဟောင်း မိတ်သစ်များ အားလုံးကို 1/8/15 မှ 10/8/15 ထိ Treatment ကို 15% discount ၊ Product ကို3% discount ဖြင့် Promotion ပေးပါမည်။
Welcome to Origin Herbal Hair Treatment Center
ဓာဓုဓာတ်လွန်ကဲသော ပစ္စည်းများဖြင့် သင်၏ဦးရေပြားနှင့် ဆံသားအတွက် Treatment ပြုလုပ်ခြင်းကို ရပ်လိုက်ပါ။ ဤနေရာသည် သင်၏ဦးရေပြားနှင့် ဆံသားကျန်းမာရေးအတွက် 100%ပြည့်သဘာဝကျပြီး လွယ်ကူသောနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းပေးနေပါပြီ။ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြည့်စုံသောဦးရေပြားနှင့် ဆံသားပိုင်ဆိုင်ရန် စစ်မှန်သော အလှအပပြုပြင်ခြင်းမှစတင်လိုက်ပါ။ မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုသည် သင့်အတွက် ရာနှုန်းပြည့် ကောင်းကျိုးသက်ရောက်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရမည်။ Bee Choo Originသည် သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများဖြင့် ဆံပင်ကိုပေါင်းတင်ခြင်း၏ အတွေ့အကြုံမှာ ၁၀နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို ပင်တိုင်သဘာဝဆေးဖြင့် Treatment လုပ်ပေးသည်။
Our Title Awards
This is our recent advertisment that we have created for Myanmar Origin. We will be showcasing this advertisment both in the Cinema and Radio. Do remember to share this video and like it!
Posted by Myanmar Origin Hair Treatment Co.Limited on Thursday, August 6, 2015
ရှေးယခင်ပုံသေနည်းများဖြင့် Top-Grade Herbs (Ginseng: ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ဦးရေပြားအဆီထွက်ခြင်းတို့ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ Dan Gui: သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းပြီး ဦးရေပြားသန့်စင်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးသည်။ He Show Wu: ဆံပင်ကိုမည်းနက်တောက်ပြောင်စေပြီး ဆံပင်ဖြူအထွက်နှေးအောင် ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ Ling Zhi: ဗောက်ထခြင်း၊ ဦးခေါင်းအရေပြားယားယံခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေသည်။) သဘာဝသစ်ဥသစ်ဖုနှင့် အရွက်များကိုသာ အသုံးပြုထားသည်။ ဤအချက်သည် Bee Choo Origin Product၏ ပစ္စည်းအရည်အသွေး အာမခံချက်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုထိတိုင် Bee Choo Origin Herbal Hair Treatment Product သည် Singapore နိုင်ငံတွင် popular အဖြစ်ဆုံးသော Hair Care Product တစ်ခုဖြစ်သည်။
Shwe Gon Taing Branch
No.173(b), West Shwe Gon Taing Road, Bahan Township Yangon, Myanmar
Tel: 09 448548350
No.20,Ground Floor, Baho Road ( Near Asia Royal Hospital ) Shauchaung Township, Yangon, Myanmar
Tel: 09 731 403 68, 09 733 337 33, 01 510034
No.102, 73rd Street ( Between 31 x 32 ) Chan Aye Thar San Township, Mandalay, Myanmar
Tel: 02 35228, 09 513 8381
Myanmar Origin Hair Treatment Co.Limited
Origin Herbal Hair Treatment © All Rights Reserved.